Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle oo si weyn loogu soo dhaweeyay Beledweyne +(SAWIRRO) – HalQaran.com
Beledweyne (Halqaran.com) – Wafdi uu hoggaaminaayo Madaxweyne Ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle, Yuusuf Axmed Hagar, ayaa Khamiistii maanta gaaray Magaalada Beledweyne.
Xubnaha Wafdiga ayaa waxaa si wayn loogu soo dhaweeyay Magaalada Beledweyne, waxaana garoonka ku soo dhaweeyay qaybaha Bulshada iyo Maamulka.
Madaxweyne Ku xigeenka Maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) ayaa la filayaa inuu kulamo kala duwan la qaato Odayaasha dhaqanka Beledweyne.
Todobaadka soo socda ayaa la filayaa in Madaxweynaha Hirshabeelle uu gaaro Magaalada Beledweyne, iyadoo Safarka maanta dabageed uu horudhac u yahay xubnaha Wafdigaasi.
Waa safarkii ugu horeeyay ee Madaxweyne Ku xigeenka Hirshabelle uu ku tago Magaalada Beledweyne tan iyo markii ay dhacday doorashada Maamulkaasi.
Tags: Dabageed, maamulka Hirshabeelle, magaalada Beledweyne, soo dhaweyn, Yuusuf Axmed Hagar
RW Rooble oo howlgeliyey Guddiyada Doorashooyinka Heer Federaal & Xalinta Khilaafaadka +(SAWIRRO)